ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် အသုံးပြုမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၁/၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၀၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန် စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (၁/၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (Institutional Animal Care and Use Committee) ဖွဲ့စည်းထားမှု လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကော်မတီဝင် ပြောင်းလဲဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကို ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာဝင်းမော်ထွန်းက ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဌာနခွဲမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာအေးဝင်းဦး က ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို တင်ပြပြီး Animal Ethics နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများက ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အသစ် ခန့်ထားရန်ကိစ္စ၊ ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရန်ကိစ္စ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဌာနခွဲမှ တိရစ္ဆာန်များ အသုံးပြုသည့်သုတေသန စီမံ ချက်များအား စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပေးခြင်း ကိစ္စများကို ဆွေးနွေး၍ အတည်ပြုချက်ရယူခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်း အဝေးသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သုတေသီများ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေး ဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းမြင့်တို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာခြင်း
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အလယ်အလတ်အဆင့် အရာထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု သင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာသင်တန်းအမှတ်စဉ်(၃)မှ ကြီးကြပ်သူ ဆရာ/ဆရာမ (၁၃)ဦးနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၆၇)ဦးပါဝင်သော လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)သို့ ရောက်ရှိလာရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း) ဒေါက်တာမိုးကျော်မြင့်က အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူး(စစ်ဆေးရေး) ဒေါက်တာရီရီမြက ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက်လေ့လာရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား ဌာနမှူး(ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး) ဆရာမ ဒေါ်ခင်စမ်းယုက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူးများနှင့် လေ့လာရေးအဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် မှတ်တမ်းတင် ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကြ ပါသည်။
လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)ရှိ ဇီဝဓါတုဗေဒသုတေသနဌာနခွဲ၊ ပရ ဆေးစိုက်ခင်းနှင့် ပရဆေးဥယျာဉ်များ၊ ဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက်နှင့် Herbal Museum တို့ကို လေ့လာ ကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။ လေ့လာရေးအဖွဲ့အား ဦးစီးဌာနမှ အကျွေးအမွေးဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ပြီး အဆိုပါ လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။
တာဝန်ခံမှုရှိသော သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုတေသနစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန လက်တွေ့ အသုံးချသုတေသနထောက်ပံ့ကြေး (2018-2019 Implementation Research Grant) ရရှိသူ သုတေသီများ အတွက် တာဝန်ခံမှုရှိသော သုတေသနဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သုတေသနစီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့်မော်လီကျူးသုတေသနဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ(၂) ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသူများ စုပေါင်း၍ အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပို့ချသူများအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ်(၁) ရန်ကုန်၏ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ပါမောက္ခဒေါက်တာဖေသက်ခင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့အမှတ်(၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးခင်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ် သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်သက်ဝေနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာခင် စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်တွေ့အသုံးချသုတေသနထောက်ပံ့ကြေး(2018-2019 IR Grant)ရရှိသူ နယ်ပယ်အသီးသီးမှသုတေသီများ စုစုပေါင်း (၁၁၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပသော ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A (H1N1) ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး အသိပေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃ ရက် နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပ သော ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A (H1N1) ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအသိပေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း ဦးဆောင်သော ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲမှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများတက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားကို ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်ခင်က အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအောင်ခင်၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်သန်းထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ စုစုပေါင်း (၅၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရာသီတုပ်ကွေးA(H1N1)နှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ လက်ရှိဆောင်ရွက် လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေါက်တာခင်ခင်ကြီး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(ကူးစက်)က ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့သည်။ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်)မှ ဒေါက်တာဥမ္မာဆွေတင်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးက ရာသီတုပ်ကွေးA(H1N1) ရောဂါရှာဖွေရေး လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ A(H1N1)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို ဒေါက်တာသင်းသင်းနွယ်၊ ကုသရေးဦးစီး ဌာနမှူးက ရှင်းလင်းတင်ပြပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များက သိလိုသည် များကို မေးမြန်းခဲ့ကြပြီး တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားကို ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ ဒေါက်တာအောင်ခင်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကားပြောကြားပြီး ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။
“Research Methodology Workshop 2019 for Ph.D. Candidates” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၅ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် “Research Methodology Workshop 2019 for Ph.D. Candidates” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားကို ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ကိုယ်စား) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြား ပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူးများနှင့် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန အောက်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်များမှ ပါရဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်း တက်ရောက်နေသူ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၂၇)ဦး၊ သင်တန်းဆရာ(၁၅)ဦး စုစုပေါင်း(၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)အား သုတေသနပြုလုပ်နိုင်ရန် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် သည့် ဗဟိုဌာန(Research Training Center)အဖြစ် အားဖြည့်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်း စဉ်၏ နဝမမြောက်သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပါရဂူဘွဲ့လွန်သင်တန်းသားများ သုတေသနစွမ်း ဆောင်ရည် မြင့်မားစေရန်နှင့် သုတေနသနည်းပညာကို စနစ်တကျ ပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သင်တန်းတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ သုတေသီများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)နှင့် ဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)မှ ဆရာများ ပူးပေါင်းသင်ကြားပြသပေးပြီး သင်တန်းကို သြဂုတ်လ(၅)ရက်နေ့မှ (၉)ရက်နေ့ အထိ(၅)ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန တေရသကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပ
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ တေရသကြိမ်မြောက် ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၆ ရက်(၁၃၈၁ ခုနှစ် ဝါခေါင်လဆန်း ၆ ရက်) နံနက် ၉:၄၅ နာရီတွင် ဗဟိုဇီဝဆေးပညာ စာကြည့်တိုက်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံပါဠိတက္ကသိုလ် ပဓာနနာယကဆရာတော် တိပိဋကဓရ ဓမ္မဘဏ္ဍာဂါရိက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ(ယောဆရာတော်) အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာတော်(၁၀)ပါးတို့ ကြွရောက် တော်မူကြပြီး၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်သုတေသနပညာရှင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ငြိမ်း)ပါမောက္ခ ဒေါက်တာအောင်သန်းဘတူ အမှူးပြုသော အငြိမ်းစားဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)မှ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ တက်ရောက်ကြည်ညိုကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာ ဆရာတော်သံဃာတော်များ နှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက အခမ်းအနားကို “နမောတဿ” သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဘုရားကန်တော့၍ ဖွင့်လှစ်ကြပါ သည်။ ထို့နောက် ယောဆရာတော်ထံမှ ငါးပါးသီလခံယူပြီး ဆရာတော် အရှင်သူမြတ်များက ပရိတ်တရားတော် များကို ရွတ်ဖတ်သရဇ္စျာယ်တော်မူကြပါသည်။ ထို့နောက် ယောဆရာတော် အမှူးပြုသော သံဃာတော်များအား ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်သန်းဘတူနှင့်ဇနီး ဒေါက်တာခင်ခင်ထွေး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဇော်သန်းထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အငြိမ်းစားဆရာကြီး၊ ဆရာမကြီးများ၊ ဧည့်ပရိသတ်များက ဝါဆိုသင်္ကန်း ၆၅ စုံ၊ သင်္ကန်းခြင်း ၅ ခြင်း နှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြ ပါသည်။ ဆက်လက်၍ နဝကမ္မအလှူငွေနှင့် ဓမ္မစာပေပြန့်ပွားရေး အလှူတော်ငွေ စုစုပေါင်း (၆၅၀၀၀၀)ကျပ်ကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာဇော်မြင့်က ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကပ္ပိယကာရကအဖြစ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေး) ဒေါက်တာတင်ဦးက လက်ခံပါသည်။ ထို့နောက် ယောဆရာတော် ဘုရားကြီးထံမှ အနုမောဒနာတရားတော်ကို နာယူကြပြီး ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မိသားစုနှင့် ဧည့်သည်များက လှူဒါန်းမှု အစုစုတို့အတွက် ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက အခမ်းအနားအောင်မြင်ခြင်း အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ရွှေမိုးငွေမိုး ကြဲပက်ဖျန်း၍ ဧည့်ပရိသတ်များက “ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဋ္ဌတု” သုံးကြိမ်ရွတ်ဆိုကာ အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပြီး ဧည့်ပရိသတ်များနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ဒံပေါက်ထမင်းဖြင့် ကျွေးမွေး ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၇ ရက် ညနေ ၃:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဇီဝကမ္မဗေဒသုတေသနဌာနခွဲ၏ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုနည်းသူများကို (၁၂) ပတ်ကြာ မြန်မာကြံ့ခိုင်မှုအကလေ့ကျင့်စေပြီး ၄င်းတို့၏နှလုံးနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု၊ ယောင်ယမ်းမှုနှင့်ဆိုင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများ တုံ့ပြန်မှုအား လေ့လာခြင်း သုတေသနစီမံချက်အတွက် မြန်မာကြံ့ခိုင်မှု အကလေ့ကျင့်ခြင်း အစီအစဉ်ကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာ စာကြည့်တိုက် စာဖတ်ခန်း၌ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ရာသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုသေတန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာမိမိလေး၊ အားကစားမှူးဦးဌေးဇော်ဦးနှင့် သုတေသနစီမံချက် တွင်ပါဝင်ကြမည့်သူများ စုစုပေါင်း(၇၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါအကလေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်အား တစ်ကြိမ်လျင်(၁၀)မိနစ်၊ အနည်းငယ်နား၍(၅)ကြိမ် (တစ်ရက်လျင်မိနစ် ၅၀)၊ တစ်ပတ်လျင်(၃)ရက်ဖြင့် (၁၂)ပတ်ကြာ စနစ်တကျ ပြုလုပ်လေ့ကျင့်စေမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသည့် ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လက်ရှိတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကိုသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပိုမိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၀ ရက် နံနက် ၇:၃၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည့် တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားရသည့် ပြည်သူများအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများနှင့် လက်ရှိတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပိုမိုအားဖြည့်ဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ရောဂါနှိမ်နင်းရေး) ဒေါက်တာ သန္တာလွင်က လက်ရှိတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် ရေလွမ်းမိုးမှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ ရေဝင်ရောက်မှုအခြေအနေ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေကွပ်ကဲမှုစင်တာကို (၂၄)နာရီ အချိန်ပြည့် ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ ဗဟိုအဆင့်မှ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများသို့ လုပ်ငန်းပံ့ပိုးမှုနှင့် ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ထားရှိမှု အခြေအနေ၊ နှီးနွှယ်ဌာနများ၊ မိတ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား တင်ပြပြီး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ကုသရေး) ဒေါက်တာသီတာလှက ဆေးရုံများရေဝင်ရောက်မှု အခြေအနေ၊ ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်းများထိခိုက်ပျက်စီးမှု အခြေအနေနှင့် လူနာများအား ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအားတင်ပြပြီး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ဝယ်ယူဖြန့်ဖြူးရေး) ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က မြွေဆိပ်ဖြေဆေးများလုံလောက်မှုရှိကြောင်းနှင့် ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ အရန်သင့်ထားရှိမှုများအားဆွေးနွေး တင်ပြသည်။ ဆက်လက်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန) ဒေါက်တာ စိုးဦးက ရေဘေးအန္တရာယ်ကျန်းမာရေးတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် ရန်ပုံငွေလျာထားမှုအခြေအနေ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစင်တာ ဖွင့်လှစ် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများအား တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။ ထိုနောက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော် က ဆွေးနွေးရာတွင် ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် WHO, ADB သာမက World Bank ရန်ပုံငွေမှလည်း သုံးစွဲနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစား ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်နှင့် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများက အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ထပ်မံ လိုအပ်သည်များ အမြန်ဆုံးပံ့ပိုးပေးနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဒေါက်တာသာထွန်းကျော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန) ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန) ပါမောက္ခဒေါက်တာခင်ဇော်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန) ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်း ထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများစုစုပေါင်း (၅၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာနှီးနှောဆွေးနွေးပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတက်ရောက်
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၀ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာ နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နှီးနှောဆွေးနွေးပွဲ (Symposium on “Public-Private Partnership in Health in Myanmar”) သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာနေဝင်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။ အဆိုပါ နှီးနှောဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲတွင် Global Financing Facility မှ Health Specialist Mrs. Sneha Kanneganti က Concept of Public-Private Partnership in General and Health ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးက Myanmar Policy for Public-Private Partnership and Foreign Investment ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်စွာလွင်က Public-Private Partnership in Myanmar, Ministry of Health and Sports Perspective ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားသွေး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာသီတာအောင်က Public-Private Partnership in Myanmar, Blood Bank Model ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Marie Stope International မှ Country Director Dr. Sid Naing က Public-Private Partnership in Myanmar, NGOs Perspectives ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးရုံအုပ်ချုပ်မှုပညာအဖွဲ့မှ ဒေါက်တာ တင်ညိုညိုလတ် က Public-Private Partnership in Myanmar, Private Health Services Perspective ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ National Health Plan Implementation Monitoring Unit မှ လက်ထောက် အတွင်းဝန် ဒေါက်တာသန့်စင်ထူး က Public-Private Partnership in National Health Plan; Current and Future, Problems and Difficulties ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက Public-Private Partnership in Medical Education in Training ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ N Health Asia and Non Hospital Group of BDMS မှ Mr. Narongrid Galaputh က ထိုင်းနိုင်ငံ၏ Public-Private Partnership အတွေ့အကြုံများ ခေါင်းစဉ်ဖြင့်လည်းကောင်း အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး နှီးနှောဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာ ရေးကဏ္ဍမှ ပညာရှင်များက မေးမြန်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နှီးနှောဆွေးနွေးဖလှယ်ပွဲသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြလေးစိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစံရွှေဝင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဆေးနှင့်ဆေးနှီးနွှယ်တက္ကသိုလ်များမှ ပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်များ၊ ဆေးရုံအုပ်ကြီးများ၊ ဆေးပညာဘာသာရပ် အသီးသီးမှ ပါမောက္ခများ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန် အသင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆေးကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများအသင်း၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဖောင်ဒေးရှင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အစရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ခဲ့ကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၃ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ ဆွမ်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေရှိ နိုင်ငံတော် ပရိယတ္တိ သာသနာ့တက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်) မိုးကုတ် ဆွမ်းစားကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်၊၊ ရှေးဦးစွာ နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ် ဒုတိယ ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇောတိက အမှူးပြုသော ပင့်သံဃာတော်ငါးပါးနှင့် ဧည့်ပရိသတ်များက “နမောတဿ”သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဘုရားကန်တော့၍ အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပြီး၊ ဆရာတော် ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇောတိကထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြပြီးနောက် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (စီမံ/ဘဏ္ဍာ) ဒေါက်တာ ဇော်မြင့်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး (အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေး) ဒေါက်တာတင်ဦး၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးဦးစီးဌာနမှူး ဦးတင့်လွင်၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာစုစုပိုင်တို့က လှူဖွယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းနှင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုအစုစုတို့ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြသည်၊၊ ထို့နောက် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာနနှင့် အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းမိသားစုတို့၏ ဆွမ်းအလှူတော်ငွေ ကျပ်ခြောက်သိန်းတိတိကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းက ပေးအပ်လှူဒါန်းရာ ကပ္ပိယကာရကအဖြစ် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဦးက လက်ခံရယူပါသည်၊၊ ထို့နောက်လှူဒါန်းမှုအစုစုအတွက် ရေစက်သွန်းချအမျှပေး ဝေကာ “ဗုဒ္ဓသာသနံ စိရံ တိဋ္ဌတု” သုံးကြိမ် ရွတ်ဆို၍ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်၊၊ အခမ်းအနားအပြီးတွင် ဆရာတော်ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တဇောတိကနှင့် သံဃာတော်များအား နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
Data Analysis Workshop on "Perspectives on House Officer ' Internship Training in Myanmar: A Qualitative Study" ကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၃ ရက် နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် Data Analysis Workshop on "Perspectives on House Officer' Internship Training in Myanmar: A Qualitative Study" ကို ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး(လူမှုဆေး) ဒေါက်တာစောစော တက်ရောက်၍ အဖွင့်မိတ်ဆက် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်း အမြစ်ဦးစီးဌာန အောက်ရှိ ဆေးတက္ကသိုလ်အသီးသီးမှ ပါမောက္ခ၊ ကထိကများ၊ လက်ထောက်ကထိကများ၊ နည်းပြများနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း (၂၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး သြဂုတ် ၁၃ ရက်နေ့မှ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၃ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Hokkaido University တို့၏ သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ(MoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဗဟိုဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက် အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း တက်ရောက်၍ အမှာစကား ပြောကြားသည်။ အဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သက်ဆိုင်ရာဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သုတေသီများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ Hokkaido University မှ Prof. Yasuhiko SUZUKI နှင့် Asst. Prof. Chie NAKAJIMA တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နှစ်ဖက်နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) အား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ Hokkaido University မှ Prof. Yasuhiko SUZUKI တို့က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီး အပြန်အလှန် လဲလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်၁၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၌ကျန်းမာကြံ့ခိုင် မှု အကလေ့ကျင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကို စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအကလေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် ပြောင်းလဲမှုနှင့် ယောင်ယမ်းစေသောဓာတုပစ္စည်းများ ပြောင်းလဲမှုအပေါ်တွင် အကျိုး သက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလေ့ကျင့်ရာသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာခင်မိမိလေးနှင့် လေ့ကျင့်မှုတွင် ပါဝင်ကြသူများ စုစုပေါင်း(၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အကလေ့ကျင့်မှုကို အားကစားနည်းပြ ဒေါ်အိသဉ္ဇာ လင်းနှင့် ဒေါ်စန္ဒာဝင်းတို့က လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီး တစ်ပတ်လျှင်(၃)ရက်ဖြင့် (၁၂)ပတ်ကြာ စနစ်တကျပြု လုပ် လေ့ကျင့်ကြမည်ဖြစ်သည်။
“Training on International Conference on Harmonisation and Good Clinical Practice (ICH- GCP)” သုတေသနအမူအကျင့်ကောင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန၊ သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသော သုတေသနအမူအကျင့်ကောင်းများ နှင့်ပတ်သက်၍ သင်တန်းဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း “Training on International Conference on Harmonisation and Good Clinical Practice (ICH-GCP)”ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအား ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့် မော်လီကျူးသုတေသနဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ (၂)၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်ကိုယ်စား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ တက်ရောက်၍ အဖွင့်မိတ်ဆက် အမှာ စကား ပြောကြားပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ပို့ချသူများအဖြစ် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ပါမောက္ခဒေါက်တာဖေသက်ခင်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆေးပညာရှင်အဖွဲ့ အတွင်းရေး မှူး၊ ဒေါက်တာရဲထွဋ်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင် မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ အမှတ် (၁) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးခင်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက္ကသိုလ် သုတေသန ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမြတ်ဘုန်းကျော်၊ ဆေးသု တေသနဦးစီးဌာန၊ သုတေသနကျင့်ဝတ်နှင့်ကျွမ်းကျင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာခင်သက်ဝေနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ ခင်စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ နှီးနွှယ်တက္ကသိုလ် (၁၆)ခုမှ ပညာရှင်များ၊ သုတေသီများ၊ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယ ပညာဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့မှ Clinical Trials/ Clinical Studies သုတေသန ပြုလုပ်နေသူ(၈၅)ဦး စုစုပေါင်း (၉၅)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းကို သြဂုတ် ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက် နှစ်ရက်တိုင် ဆွေးနွေးသင်ကြားပို့ချခဲ့ကြပြီး၊ ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းနှင့် ဦးဆောင်ဆွေးနွေး သင်ကြားပို့ချသူများက သင်တန်းဆင်း ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို အသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းမှ သင်တန်းသား /သင်တန်းသူများ လာရောက်လေ့လာ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၅ ရက် နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အရာထမ်းလောင်းအခြေခံသင်တန်း၊ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်း စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၆)မှကြီးကြပ်သူဆရာ/ဆရာမ(၁၃)ဦးနှင့် သင်တန်း သား/သင်တန်းသူ(၈၈)ဦး ပါဝင်သော လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)သို့ ရောက်ရှိ လာရာ တာဝန်ရှိသူများက ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးခန်းမ(၁)၌ ညွှန်ကြားရေးမှူး(စစ်ဆေးရေး) ဒေါက်တာရီရီမြက ကြိုဆို နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာအောင်ကျော်ကျော်က ဆေးသုတေသန ဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။ လေ့လာရေးအဖွဲ့ကိုယ်စား ဌာနမှူး(ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေး) ဆရာမဒေါ်ခင်စမ်းယုက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး အမှတ်တရလက်ဆောင် ပေးအပ်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ဌာနခွဲမှူးများနှင့် လေ့လာရေးအဖွဲ့တို့ တက်ရောက်ခဲ့ ကြသည်။ အခမ်းအနားအပြီးတွင် စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပါသည်။
လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန(ပြင်ဦးလွင်ရုံးခွဲ)ရှိ ပရဆေးစိုက်ခင်းနှင့် ပရဆေး ဥယျာဉ်များ၊ ဓါတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဌာနခွဲ၊ ဇီဝဆေးပညာစာကြည့်တိုက်နှင့် Herbal Museum တို့ကို လေ့လာကြရာ တာဝန်ရှိသူများက ရှင်းလင်းဖြေကြားပေးခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် နေ့လယ် ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၅ ရက် နေ့လယ် ၁၂:၃၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန အောက်ရှိ ဦးစီးဌာနတို့မှ သုတေသီများအတွက် စာရင်းအင်းပညာ အခြေခံသဘောတရားများနှင့် လက်တွေ့နည်း ပညာများကို သိရှိနားလည်ပြီး စနစ်တကျပြန်လည်အသုံးချနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Training Workshop on “Essentials of Statistics for Health Research နှင့် Research Capacity Strengthening on Conducting Implementation Research”တို့ကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဇီဝဆေးပညာသုတေသန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာခင်စောအေးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သင်တန်းပို့ချမည့်သူများ၊ Facilitator များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်၊၊ ထို့နောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူး ဒေါက်တာမျိုးမျိုးမွန်က “Training Workshop on Essentials of Statistics for Health Research”နှင့် "Research Capacity Strengthening on Conducting Implementation Research တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အစီအစဉ်မူကြမ်းကို အသေးစိတ်တင်ပြရာ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူနှင့် တက်ရောက်လာ သူများက ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး အတည်ပြုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်၊၊ ထို့နောက် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူက နိဂုံးချုပ်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို မွန်းလွဲ ၁:၄၅ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့သည်၊၊
Training on Scientific Writing အခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၉ ရက် နံနက် ၉:၀၀ နာရီတွင် Training on Scientific Writing ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့်မော်လီကျူးသုတေသနဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ (၂) ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းတက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး များ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူးများနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ကုသရေး ဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာနတို့မှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၂၇)ဦး၊ သင်တန်းဆရာ(၁၂)ဦး စုစုပေါင်း(၄၀)ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသော၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ကျင်းပပြုလုပ်ရန်လျာထားသည့် Training Workshop စုစုပေါင်း(၁၄)ခုအနက် ဤသင်တန်းသည် (၁၁)ခု မြောက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား သုတေသနစာတမ်းများအဖြစ် ရေးသားပြီး သုတေသနဂျာနယ်များသို့ တင်သွင်းရာတွင် လိုအပ်သော နည်းစနစ် များအား စနစ်တကျ သင်ကြားလေ့ကျင့်နိုင်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဝါရင့်သုတေသီများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း Vital Strategies နှင့် The Union တို့မှ ဆရာများက စာတွေ့လက်တွေ့ ပူးပေါင်းသင်ကြားပြသပေးပြီး သင်တန်းကို သြဂုတ်လ(၁၉) ရက်နေ့မှ (၂၃) ရက် နေ့ အထိ (၅)ရက်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် Kunming Medical University ၏ the Administration Committee ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Mr. Yuan Bin နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၁၉ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၁၅ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် Kunming Medical University ၏ the Administration Committee ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Mr. Yuan Bin နှင့်အဖွဲ့အား လူမူဆေး ပညာသုတေသနဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီး ဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက် ကြ၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် Kunming Medical University နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
Adult Medicine Division of the Royal Australasian College of Physicians (RACP) ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ Prof. Paul Komesaroff အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၅ ရက် နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းသည် Adult Medicine Division of The Royal Australasian College of Physicians(RACP)၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Prof. Paul Komesaroff အား လူမူဆေးပညာသုတေ သနဌာနအစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာသန်းစိန်၊ Regional Adviser of RCPE to Myanmar ဂုဏ်ထူးဆောင်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာညွှန့်သိန်းတို့ တက်ရောက်ကြ၍ သြစတြေးလျနိုင်ငံ the Royal Australasian College of Physicians(RACP)၊ Monash University တို့နှင့် သုတေသနဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
“Training Workshop on Essentials of Statistics for Health Research” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၆ ရက် နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော“Training Workshop on Essentials of Statistics for Health Research” အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန အဆင့်မြင့်မော်လီကျူးသုတေသနဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ(၂) ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်း (ကိုယ်စား) ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပြီး ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးများ၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူးများနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန၊ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ တိုင်းရင်း ဆေးပညာဦးစီးဌာန၊ အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနတို့မှ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၃၇)ဦး၊ သင်တန်းဆရာ(၁၅)ဦး စုစုပေါင်း(၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ရန်လျာထားသည့် Training Workshop စုစုပေါင်း(၁၄)ခုအနက် ဤအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသင်တန်းသည် (၁၂) ခုမြောက်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်တန်းသားများ စာရင်းအင်း ပညာအခြေခံ သဘောတရားများနှင့် လက်တွေ့နည်းပညာများကို သိရှိနားလည်ပြီး စနစ်တကျပြန်လည်အသုံးချ နိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ သင်တန်းတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ သုတေသီများက EpiData နှင့် SPSS Software တို့ကိုအသုံးပြု၍ စာတွေ့လက်တွေ့ သင်ကြားပြသပေးပြီး သင်တန်းကို သြဂုတ်လ(၂၆) ရက်နေ့မှ (၂၈) ရက်နေ့အထိ (၃) ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟီဒေါတက္ကသိုလ်မှ Faculty Adviser, Dr. Chusak Prasittisuk အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၂:၃၀ နာရီတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပါမောက္ခဒေါက်တာဇော်သန်းထွန်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ Mahidol University Faculty of Tropical Medicine မှ Faculty Adviser, Dr. Chusak Prasittisuk အား လူမူဆေးပညာသုတေသနဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (သုတေသန) ဒေါက်တာလှိုင်မြတ်သူ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာမို့မို့ထွန်း၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ဌာနခွဲမှူး (ကပ်ပါး) ဒေါက်တာကေသွယ်ဟန်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး/ ဌာနခွဲမှူး(ကိမိလဗေဒ) ဒေါက်တာရန်နောင်မောင် မောင်နှင့် Dr. Md. Mushfigur Rahman, Technical Officer, WHO Country Office for Myanmar တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ Malaria Vector Control, Medical Entomology လုပ်ငန်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
သုတေသနနည်းပညာဘာသာရပ် (Research Methodology) သင်တန်းပြီးမြောက်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပ
၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ် ၃၀ ရက် မွန်းလွဲ ၁:၀၀ နာရီတွင် အားကစားအထူးပြုဘာသာရပ် B.Sc. (Sport) သင်တန်းတွင် တက်ရောက်နေသော သင်တန်းသားများ၏ သုတေသနနည်းပညာဘာသာရပ် (Research Methodology) သင်တန်းပြီးမြောက်ခြင်း အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ တာမွေကြီး (ခ)ရပ်ကွက်ရှိ အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာသိင်္ဂီသွင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(သုတေသန) ဒေါက်တာဝင်းမောင်ထွန်းနှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ သင်ကြားပို့ချသူများ၊ ကြီးကြပ်ပံ့ပိုးသူများနှင့် သင်တန်းသား/သင်တန်းသူ (၄၁) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ သင်တန်းကာလ (၇ ပတ်)အတွင်း အပတ်စဉ်သောကြာနေ့တိုင်း ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနမှ သုတေသီပညာရှင်များက သုတေသန နည်းပညာများကို ဆွေးနွေးပွဲပုံစံဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းသားများက အုပ်စု(၃) စုခွဲကာ သုတေသန အဆိုပြုလွှာများကို ရေးဆွဲပြုစုခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်၍ သင်တန်းပြီးမြောက်ခြင်းလက်မှတ်များ ပေးအပ်ခြင်း၊ Group Presentation ဆုရရှိသော အဖွဲ့အား ဆုများပေးအပ်ခြင်း၊ သင်တန်းသားများအား သင်တန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အတွေ့အကြုံ လိုအပ်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားကြပြီး အခမ်းအနားကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။
Read July 2019 Events ...